Nhau - Mushure mekugara muindasitiri yesilicone kwenguva yakareba, vatengi vazhinji vanonzwa uyu mubvunzo: zvigadzirwa zvesilicone zvine saizi imwechete kana kunyangwe chimiro chakafanana chine mitengo yakasiyana.
Mushure mekugara muindasitiri yesilicone kwenguva yakareba, vatengi vazhinji vanonzwa uyu mubvunzo: zvigadzirwa zvesilicone zvine saizi imwechete kana kunyangwe chimiro chakafanana chine mitengo yakasiyana. Pamusoro penyaya iyi, kwaimbovepo
Ndakanetseka kwechinguva. Kuti ndigadzirise dambudziko iri, pamusoro pekudzidza kubva kune vakagara vamberi muindasitiri, ndakatengawo zvigadzirwa zvesilicone zvemitengo yakasiyana, vagadziri, nematunhu ekuenzanisa.
Nhasi, ini ndichakupa tsananguro yakapusa yekambani yedu’s zvigadzirwa, netarisiro yekukubatsira kuti uwedzere kunzwisisa iyo silicone zvigadzirwa indasitiri.
1. Panyaya yezvinhu: Mamwe maindasitiri akasarudzika ane hunhu hunodiwa kune zvigadzirwa zveasilicone. Semuenzaniso, mutengo wezvigadzirwa zvesilicone zvakagadzirwa nemamiriro ekunze glue uye zvakajairika zvigadzirwa zveasilicone zvakatosiyana.
2. Saizi yekuumbwa: Imwe silica gel inotaridzika yakafanana nekunze, asi kukura kwayo kwemukati kunogona kunge kwakasiyana, uye chimiro chakanyanya kuomarara, izvo zvinokanganisa kuburitsa goho, saka mutengo hausi zvakafanana.
3. Maitiro: Iyo kusiana kwenzira yekugadzira yezvigadzirwa zvesilicone zvinokanganisawo mutengo wekugadzira. Zvakaita siriki kudhinda, kupurinda roll, kupisa kupisa, nezvimwe panguva yekugadzira
4. Mould: Huwandu hwemakomba muchigadzirwa chechigadzirwa hunokanganisa kugona kwekugadzira. Chete kana mutengi achida uye huwandu hwemakomba muforoma ukasvika pachiyero chakaringana, ndipo panogona kudzikiswa mitengo yevashandi uye mutengo-unoshanda wezvakagadzirwa zvigadzirwa zvesilicone zvinogona kuvandudzwa.
5. Kudiwa: Kwechigadzirwa chimwe chete, iyo yakawedzera nhamba yekugadzirisa, mutengo unenge uchifadza.
Kubva pane zvataurwa pamusoro, zvinogona kuoneka kuti mutengo wezvigadzirwa zvesilicone zvinoita zvakafanana hazvizove zvakafanana. Iyo ine chekuita nezve mbishi zvinhu zvinoshandiswa, dhizaini dhizaini, chigadzirwa tekinoroji, chakuvhuvhu mhango nhamba uye kurongeka huwandu
Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuti vatengi vaone izvi zvirimo vasati vagadzirisa chigadzirwa, vobva vashandira pamwe nemugadziri. Zhongsheng Silicone inogamuchira vese vatengi kuti vauye kuzo gadzirisa, chero bedzi iwe uchida, isu tinogara tiripo.